true conditions /zu-ZA/tools-for-life/conditions/steps/survival-and-ethics.html read 20 21 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/conditions_zu_ZA.jpg Ukuziphatha neZimo
20.‎1 FUNDA LENDATSHANA
Into ebalulekile okufanele uyiqaphele ukuthi amafomula ezimo akhona.
Bayingxenye yanoma yimuphi umsebenzi. Futhi manje njengoba esaziwa kufanele alandelwe.
Ukulandela ifomula yesimo kuthatha cishe amaphesenti angama-90 amathuba okuqhamuka kwebhizinisi noma ukuphatha imali yakho siqu.
Kuya ngempela ekutheni wahlulela kahle ukuthi yisiphi isimo okufanele usisebenzise nokuthi angakanani amandla owasebenzisayo ukwenza isinyathelo ngasinye samafomula.
Lapho wenza ifomula kahle, iyasebenza.
Iyasebenza noma ngabe kusetshenziswa ubuwula kangakanani inqobo nje uma kufakwa ifomula elifanele futhi ukulandelana kwezinyathelo ngqo kuthathwa.
Ukuthi uhlakaniphe kangakanani ekusebenziseni amafomula kuzovela ngejubane lokuthuthuka noma lokukhula. Ukusetshenziswa okuhle kwamafomula kuzovela ngobusuku obubodwa, ukukhuphuka okunamandla. Ukusetshenziswa okungaqondakali (hhayi okucabangayo noma okuhlakaniphile) kwamafomula, inqobo nje uma kwenziwe kahle, kuzovela ngokunwebeka kancane.
Ngamanye amagama, akekho umuntu okufanele abe yingcweti ephelele ukuze azisebenzise noma aphuphe (adale noma asungule) imibono efanelekile kuzo. Kufanele wahlulele ngokunembile ukuthi yisiphi isimo okufanele usisebenzise, ​​bese usebenza ngentshiseko nangamandla amaningi ekwenzeni izinyathelo ngokulandelana okufanele.
Ukukhanya kwemibono, ukusheshisa ukwanda, yilokho kuphela. Ukwanda noma ukuthuthuka nakanjani kuzokwenzeka.
Kodwa-ke, uma ubuthakathaka bufaka ukungeza izinyathelo ezingadingeki, ungahle wehluleke.
Futhi uma uyisiphukuphuku kangangokuba kwenziwa isahlulelo esingalungile ukuthi yisiphi isimo okufanele sisetshenziswe bese kufakwa ifomula engalungile futhi sisetshenziswa nezinyathelo zayo ngokulandelana okungalungile, lapho-ke ufanelwe ukwehluleka!
Okunye okumele ukwazi ukuthi lezi zimo zisebenza noma ngabe zisetshenziselwa izwe lonke, i-organization, ingxenye ye-organization, umndeni noma umuntu oyedwa.
Okokugcina ukwazi ukuthi ukwazi amafomula kuthwala umthwalo wokuwasebenzisa—ngoba lawa amafomula. Futhi asebenza njengomlingo.
Uma lawa mafomula engaziwa noma esetshenziswa, ukunwetshwa ngokuphelele kuyithuba noma inhlanhla noma ngabe imibono yakho mihle kangakanani.